Gurmeessaa Goobanaa: Barataan yuunvarsiitii Arsii kun kalaqawwan 25 qaba – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooGurmeessaa Goobanaa: Barataan yuunvarsiitii Arsii kun kalaqawwan 25 qaba
Gurmeessaa Goobanaa: Barataan yuunvarsiitii Arsii kun kalaqawwan 25 qaba
Gurmeessaa Goobanaa Hoolaa kalqa adda addaan kan beekamu
(BBC Afaan Oromoo) — Barataa saayinsii biqiltootaa waggaa 3ffaa yuunivarsiitii Arsii kan ta’e, Gurmeessaa Goobanaa Hoolaa bara kana meeshaalee qonnaan bulaa deeggaran jaha bakka tokkotti hojjechuu isaan badhaasota garaagaraa mo’ateera.
Dorgommii kalaqaa dhiyeenya dhaabbatni Jarman GIZ magaalaa Finfinneetti qopheesse irratti namoota 400 keessaa sadarkaa 1ffaan xumuree badhaasa hojii kalaqaa ittiin adeemsisuu birrii miliyoona tokko mo’ateera.
Dorgommii torban kalaqa Afrikaa jedhamuun magaalaa Finfinneetti qophaa’e irrattis akka Afrikaatti dorgomee sadarkaa 7ffaan xumuree badhaasota argachuu BBC’tti himeera.
Dorgommiiwwan hanga ammaatti taasise keessaa badhaasota gurguddaa afur akka mo’ates himeera.
Baadiyaatti dhaladhee guddadhus sadarkaa idila adunyaatti dorgomee mo’achuu irraa waanti na dhoerke hin jiru jechuunis dubbata Gurmeessaan.
‘Halkan sa’aa 8 irrattiin mana maatii koo gube’
Dargaggoo hojii kalaqaatiin rakkoo biyyaa hiikuuf carraaqu
Lafa qotanii sanyii facaasuu irraa eegaluun hanga midhaan calleeffamee mana bakka kuusaa isaa gahutti maashina hojjetu, maashina walii ‘BBQSHDH’ jedhamudha kan hojjete Gurmeessaan.
Kalaqa maashina qonnaa jaha bakka tokkotti waliin – Goodayyaa suuraa
‘BBQSHDH’ maqaan jedhamus, B-Buustuu Midhaanii, BQ- Biiftuu qorichaa, SH- Shoggortuu lafaa, Dh-Dhooftuu midhaanii jedhan waliiti fideen maqaa kana moggaaseef jedha.
Gurmeessaan amma barataa saayinsii biqilootaa yunvarsiitii Arsii haa tahu malee, kalaqa kan jalqabe ijoollummaa isaa irraa akka tahe hima.
Kutaa shan irraa eegaluun kalaqoota rakkoo qonnaan bulaa furanii fi hojii salphisan irratti xiyyeeffachuun hojjechaa akka ture hima.
Kalaqoota garaagaraa 25 tahan amma xumuree akka jiru kan himu Gurmeessaan isaan keessaa afuriif mirga abbummaa kalaqaa [Patent Right] Ministeera Kalaqaa fi teeknoloojii irraa argachuu isaa hime.
Dargaggoo geemii ijoollee haala salphaan kompiitara ittiin barsiisan kalaqe
Dargaggoo dorgommii kalaqaa baranaan mo’ate
Qoricha dhukkuba saree maraattee, Qoricha biichee fardaa, zayita motoraa fi maashina waliif BBQSHDH jedhamuun mirga abbummaa akka argate BBC’tti hime.
Biqiltuu naannoo isaanii jiru irraa zayita motoraa doqdoqqee fi tiraakteraaf gargaaru akka hojjetes hima.
Jalqaba dhimma biraaf osoo hojjetaa jiruu gidduutti waan boba’eef irra deebiin qorachuun zayita motoraaf gargaaru akka hojjete hima.
Obboleessa isaa kan makaanikaal injiineriingi baratu waliin tahuun xumuranii tajaajila uummataaf dhaqabsiisuuf akka hojjetan himee kanaafis ministeera teeknolojii fi kalaqaa irraa beekamtiin akka kennameef BBC’tti himeera.
Gurmeessaan diroonii meeshaa sasalphaa hanga Kg1 tahu fageenya meetira 500 deemuun deddeebisuu dandeessu hojjeteera.
Kalaqa Gurmeessaa kan agarsiisu – Goodayyaa suuraa
Irra caalaa dirree kubbaa miilaa keessatti ergaa fi meeshaa sasalphaa dedeebisuuf gargaarti kan jedhe diroonii kana beekamtii itti argachuus hima.
Qoricha biichee fardaafi dhukkuba saree maraattee
Dhukkubni biichee fardaa jedhamu qaama fardaa madeessuun beekama. Qonnaan bultootnis dhukkuba kana mala aadaan yaalaa turan.
Gurmeessaan dhukkuba kanaaf qoricha argatee mirga abbummaa fudhachuu isaa hima. Amma dhaabbata voolentarii yuuniyeen jedhamuuf oomishee akka dhiyeessaa jiru hima.
Dabalataan Gurmeessaan dhukkuba saree maraatteef qoricha akka argateefi fooyyessee dhiyeesse hima.
“Namootni yeroo vaayirasii kanaan qabaman qorichoota aadaa garaagaraa fayyadamaa turan. Yaaliin ammaayyaas akkuma jirutti tahee jechuudha.”
Gurmeessaan guyyaa tokko osoo horii eegaa jiruu namni tokko dhukkuba saree maraatteef qoricha aadaa baala tokko irraa yeroo kutu dhokatee ilaaluun sana booda yaalii garaagaraa gochuun akka qoricha fayyisuu danda’u argatee fi uummataaf dhiyeessuu eegale hima.
Kanatti mirga abbummaa [Patent Right] argachuu hima. Amma isarra fooyyessee doozii ykn hammam akka fudhatamuu qabu waliin miidhaksee uummataaf dhiyeessuuf hojjechaa akka jiru hima.
Hojii kalaqaatiif maaltu si kakaase?
Gurmeessaan kalaqaaf ijoollummaa irraa kaasee fedhii guddaa akka qabu himus baadiyaatti dhalatee yeroo guddate jiruu qonnaan bulaa kanneen salphisan irratti xiyyeeffachuun hojjechuun ammoo akka milkii isaaf kenne hima.
Meeshaalee naannoodhumatti gataman fayyadamee kalaqa garaagaraa akka hojjetaa tures hima.
Hojiin kalaqaa yeroo sadarkaa lamaffaa baratu jalqabe hanga ammaatti kan hin xumurres akka jiru hima.
Dhiyeenya kana raammoon geerii akka weeraraatti oomisha mancaasuun meeshaalee qoricha bifa salphaa taheen biifuuf gargaaran kalaquu akka qabu natti mul’isan jedha.
Kanaaf meeshaale har’a qonnaan bulaan ittiin fayyadamaa jiran akka hojjetes dubbata.
“Naannoo keenya keessa qoricha aramaa fi ilbiisotaa dugdatti baatanii biifuu irraa kan ka’e qaama isaanii tuquun namootni dhukkuba kaanseriin qabamanii mana ciisan jiru ture. Harki isaanii miilli isaanii sababa kanaan kanneen miidhaman ilaalaan ture.”
Miidhaa akkasii kana xiqqeessuuf jecha meeshaalee qoricha biifan akka hojjete hima. Rakkoof fala barbaaduun gara kalqaaatti akka imalu isa taasiseera.
OBS- Cidha Aadaa Arsii
OBS- Cidha Aadaa Arsii Oromia Broadcasting Services (OBS) miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'ee jijjiirama…
﻿ SBO: Gurraandhala 25 bara 2018. Oduu fi Qophiilee Haala Yeroo Irratti Fuuleffatan Adda addaa.
“WE WERE ASSAULTED BY THE POLICE”: ARTIST HAWI H. QENENI